Hevitra mandalo , Resaky ny mpitsimpona akotry : ampy izay ny fitapitaka | NewsMada
Hevitra mandalo , Resaky ny mpitsimpona akotry : ampy izay ny fitapitaka
Ny fahasahiranana ity efa mila handifotra mbola handany andro sy handany vola indray amin’ny fanaovana resabe tsy mandaitra ! Mitranga indray ankehitriny ny fitakina
« fikaonandoham-pirenena » mialoha ny hanaovana fifidianana. Izany ihany hono ny fomba ahafahan’ny vahoaka maneho ny heviny amin’ny maha loharanon’ny fahefana azy.
Odiana hadinoina ve fa efa nodiavina matetika ny zaikabe karazan’izany na dialogue national na mitovitovy amin’izany ny anarana nomena azy. Fitakabe tsy misy toa an’
ireny raha ny fanamasinana azy ho nasionaly izany hoe feon’ny vahoaka no nananganana azy. Ahoana moa ny fanen
drena solontena handray anjara amin’izy ireny ? Fikononkononana sy fifanamboaramboaran’ireo samy manandra-tena ho mpitondratenin’ny mponina isan-tsokajiny no tonga fomba manjaka. Porofoin’ny ampitso izany, isak’izay mandeha dia ireo niseho ho lohandohan’ny mpisorona tsy nomen’ny vahoaka ny fitokisany rehefa tonga ny fifidianana.
Fomba omena ireo diso làlana handray anjara amin’ny fanarenana fiara nivadika any an-tatatra. Na nahay nifidy ny vahoaka na tsia, ny Antenimieram-pirenena no hany tompon-teny solombavam-bahoaka, na inona na inona fomba fanendrena solontena ivelan’ny fifidianana tsy afaka hanana ny hasin’ireo izay ho voatondro amin’ny antenimiera vonjy maika izany hoe peta-toko na tandrify na tsia ny fitenenana an’izany mivantambatana. Tsy hoe akory sery vitan’anamalaho ka andeha hamonoana vantotr’akoho, fa antenimiera atsangana maimaika tsy fanta-pihaviana ve no hatao handingana ny anteminiera ara-dalàna na heverina hoe tsy mahavita azy aza ireo depiote mpikambana ao.
Ny firosoana any amin’ny fifidianana ihany no hany làlana famahana ny olana. Mazava koa andaniny fa maika ny mponina ka tsy vonona intsony amin’izany fanaovana Tetezamita izany, nefa raha sady arodana ny fanjakana no endahana amin’ny Antenimieram-pirenena ny fahefany dia ho lasa tsy misy fanjakana intsony. Raha tsy mahefa intsony anie ny parlemanta dia vao miha afaka hanao an’izay danin’ny kibony ny fitondrana. Mitresaka roa moa amin’
izao seho izao ny antenimiera toy ny hery politika, rehefa fitondrana misy ny solontenan’ny roa tonta no homena fitantanana mandra-piandry ny vokatry ny fifidianana tsy misy intsony afaka hiantehatra amin’ny fitsipi-dalao mifehy ny fifidianana mitongilana ho an’ny tombontsoan’ny mpitondra, samy izany hoe miara mitondra izany. Hafahafa kokoa noho ny fisehon’ireo lalàna maramara tsipahana amin’izao fotoana izao no tsy maintsy havoaka. Rehefa samy tsy hahazo tombon-dàlana manokana ihany ve dia tsy mba samy hampiseho fahendrena amin’ny fikarohana rariny, izany hoe tombontsoa ho an’ny firenena.